11-04-2011 03:46 PM #91
M1 အကြောင်းပြောရင် စိတ်ကို နာတယ်။ တစ်ကယ်ကိုနာတာပါ။ iPhone 3GS ကို M1 ကနေ သုံးနေတာ ၂ နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ၂ နှစ်ပြည့်တော့ ရီကွန်ထရိုက် လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ စာလာတယ်။ အချိန်ကိုက် iPhone 4s ထွက်လာတော့ အဲတာကို လဲမလို့ကြံနေတာ။ ဒါနဲ့M1 Bugis ရှိတဲ့နား မှာသွားမေးတယ်။ သူတို့ က Customer Service ကိုဖုန်းဆက်ပါပြောတယ်။
ဆက်လိုက်တာမှ သေလုမြောပါး ဆက်တယ်။ မကိုင်ရေးချ မကိုင်ဗျ။ ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်လောက် နေမှ ဖုန်းနံပတ် ထားခဲ့လို့ပြောတယ်။ ဖုန်းနံပတ် ထားခဲ့မှ သူတို့ဆီက ပြန်ခေါ်တယ်။ ဒါနဲ့Re-Contract လုပ်မယ် ဖုန်းဘောက်ချာပေးမှာလား ဆိုတော့ သူတို့က Price Plan မထွက်သေးတာမို့ပြောလို့ မရပါဘူးတဲ့။ ပလန်ထွက်မှ ဖုန်းဆက်ပါ ပြောတယ်။ ဆက်ရခက်လိုက်တာ။ ဒါနဲ့ထွက်တော့ ထပ်ပြန်ဆက်တယ်။
ဒီလိုပဲ ၁၅ မိနစ်လောက် စောင့်ပြီး နံပတ် ထားခဲ့ရတယ်။ အဲတာကျမှ အိုင်ဖုန်းအတွက် ဆို ဘာရီကွန်ထရိုက် ဘောက်ချာမှ မပေးပါဘူးတဲ့။ 4s မဟုတ်ပဲ4ယူမယ်ဆိုရင်တောင် မပေးပါဘူးတဲ့။ ဒေါက်တာဂျုံး သုံးနေတာ ၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ ငါတို့က ၂ လိုင်း ရီကွန်ထရိုက်လုပ်မှာ၊ နင်တို့တစ်ပြားမှ မပေးဘူးဆိုရင် တော့ Provider ပြောင်းမယ် ဆိုတော့လည်း သူတို့ က စိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့။ အဲလိုပြန်ဖြေတယ်။
M1 ကို တော်တော် အချဉ်ပေါက်သွားတယ်။ ၂ နှစ်တိတိ တစ်လမှ ဘေလ် နောက်ကျအောင် မပေးပါဘူး။ ၅၀ လေးတောင် မပေးချင်ဘူး။ Singtel ကတော့ Customer Service ညံ့ချက်။ ပြောမနေနဲ့ တော့။ တစ်ကယ်။ ချာတူးလန်..။ ဒါနဲ့Starhub ကို အီးမေလ်းပို့ ပြီးမေးကြည့်တယ်။ သူတို့က Provider ပြောင်းမယ်ဆိုရင် ဖုန်းဘောက်ချာ မပေးပါဘူး။ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် နဲ့လျှောက်မယ်ဆိုရင် 20% သက်သာပါမယ်။ ၃ ယောက် နဲ့ အတူတူ တစ်ခါထဲလာလျှောက်မယ်ဆိုရင် ၃၀% သက်သာမယ် ဆိုပြီး မေလ်း ပြန်လာပါတယ်။ လင့်က အောက်ကအတိုင်းပါ။ အောင်ဂလိပ် ကတော့ သူလည်း မကြာခင်က Recontract လုပ်ထားတာ ဘောက်ချာ ၁၅၀ ရတဲ့အပြင် ဖုန်းကို အိမ်အထိ လာပို့ ပေးတယ်တဲ့။ သူက စတားဟပ် အသုံးပြုသူပါ။ သူသုံးတာ မိနစ် ၃၀၀ ပလန်ပါ။ M1 ကတော့ ဘာဆို ဘာမှ မပေးပါဘူး။
အမ်၁ ကို တော်တော် စိတ်ပျက်၊ ဆင်းတဲဆို ကြောက်တာနဲ့စတားဟပ် ကို ခြေဦးလှည့်လိုက်ပါတယ်။ စတားဟပ် က ၂၈ ရက်နေ့စပြီး ရောင်းပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့် အစ်မရယ်၊ ဒေါက်တာဂျုံးရယ်၊ အစ်မ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရယ် ၄ ယောက် အတူတူ သွားလျှောက်ကြပါတယ်။ ကိုထွဋ်ခေါင် ပြောတဲ့ ဘူဂစ် အောက်ထပ်မှာပါ။ သူတို့ က ၁၁ နာရီမှ ဆိုင် စဖွင့်တယ် ပြောလို့၉ နာရီ ခွဲလောက်ရောက်အောင်သွားပြီး သွားတန်းစီပါတယ်။ အဲမှာတင် ၅ ယောက်လောက် ကိုယ့်ရှေ့ ရောက်နေပြီ။ ဒါနဲ့စတားဟပ်က လွင့်ထားတဲ့ အင်တာနက်လေး သုံးပြီး စောင့်နေတာ။ ၁၁း၀၀ နာရီမှ စဖွင့်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် အပြင်မှာ လူများနေတော့ စတားဟပ်က ၁၀း၁၅ လောက်ကတည်းက ဖွင့်ပေးပါတယ်။ အဲမှာ လိုချင်တဲ့ ၁၆ ဂစ် အဖြူ ၄ လုံးကို သိပ် အကြာကြီး စောင့်စရာမလိုပဲ ရလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ ကို မေးပါတယ်။ Recontract ဘောက်ချာပေးမှာလား ဆိုတာကို သူတို့ က ပေးပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က မတူဘူးဆိုတာ ပြန်ပြောပါတယ်။ S-Pass ဖြစ်နေတာမို့၂၀၀ စရံငွေ ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အရင်က မပေးရဘူးပြောလည်း သူတို့ က ပေါ်လစီ ပြောင်းသွားတဲ့ အကြောင်းပြောပါတယ်။
၄ ယောက်ပေါင်း ၄ လိုင်းလျှောက်ခဲ့တာမို့တစ်လကို ၃၀% သက်သာပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုန်မဏီ ကဒ်နဲ့ လျှောက်ရင် 20% သက်သာတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ၃ ယောက်ပေါင်းလျှောက်လိုက်တာ ၃၀% သက်သာလို့၃၀% ထဲပဲ ပါဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့မေးသမျှကို အဲ စတားဟပ်က ၀န်ထမ်းက အကောင်းဆုံး နဲ့စိတ်ကျေနပ် အောင် ရှင်းပြခဲ့တယ်။ အစက စတားဟပ် သုံးပါတယ်။ iPhone 3GS သုံးချင်လို့သာ m1 ပြောင်းသုံးတာ ၂ နှစ်ပြည့်သွားတော့ ဘောက်ချာလေးများ ရမလား ဖုန်းဆက်မိပါတယ်။ ခြေတို ဖုန်းခကုန် ဒေါသ အလိပ်လိုက် ထွက်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ m1 မှ အိုင်ဖုန်း မိနစ် ၁၀၀ ပလန်၊ မိနစ် ၃၀၀ ပလန် လျှောက်သူများ ဘောက်ချာ မစောင့်ပါနဲ့ လို့ ။ အာပေါက် မတတ် ပြောအောင်လည်း ပေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။
ဟွင့်။ M1 ဆို 1818 တောင် မ၀ယ်တော့ဘူး။
M1 အား စိတ်နာနေသူ
Starhub က M1 နဲ့ တစ်ချိန်ထဲ iPhone 3GS ရပါတယ်။ စစရကတည်းကပဲ သုံးနေတာ အခုမှ 4S ပြောင်းရတာလေ။
အဲတုန်းက စတားဟပ်မှာ သွားမေးတာ ကုန်ပြီတဲ့။ ရီကွန်ထရိုက် ကလည်း ပြည့်၊ သူများ iPhone 3GS လေးကို ကိုပိုးဆီ မေးတန်မေး၊ ကိုပိုး ဘလော့ ဖတ်တန်ဖတ် ပြီး ကလိ ကြည့်ရကာနေ အိုင်ဖုန်း စွဲသွားရင်း ကိုယ့် ဒေါသနဲ့ကိုယ် m1 မှာ အိုင်ဖုန်း 3GS သွားလျှောက်လာခဲ့တာ။ အဲတုန်းက ဆင်းတဲလည်း ကုန်၊ စတားဟပ်လည်း ကုန်။ m1 တစ်ခုပဲ ကျန်တော့တာ။
Last edited by johnansen; 11-04-2011 at 04:33 PM.
Ares, barronbala, bigxxx, CupidBoyz, einda74, einthu, foruall22, frodofidi, Kaung Lay Luck, kohtwe, kokoye, La Goon, ManawHary, mgchaint, MNO.BN, NayWarWar, parkye, paytue, pieces, richtt, RunAtServer, talkyboy, totekyi, zzz
11-04-2011 04:07 PM #92
Ares, barronbala, Chit.tat.lun.tu, einthu, johnansen, kokoye, MNO.BN, NayWarWar, richtt, RunAtServer
11-04-2011 04:35 PM #93
Originally Posted by johnansen
Sometime we shouldn't give up easily and should do like Singaporean. Complain lor! such as "why u can not help me?" "you don't know lor" "I managed to call 1627 the whole day but can't get thru" "Can i see your supervisor?" If you say like what i type my advise will help you next time!!
Me too... I tried to call 1627 about2hours with office hp . Really! i on ph speaker and listen m1 default music while i am working. Really man! no1 pick up and i gave up. But i can easily managed to call after 6pm.
M1 ကို တော်တော် အချဉ်ပေါက်သွားတယ်။ ၂ နှစ်တိတိ တစ်လမှ ဘေလ် နောက်ကျအောင် မပေးပါဘူး။
That's why lor! I always made payment twiceamonth and even i wait their call sometime. Of course we should let them try to call us also. That time you just revenge it.
၅၀ လေးတောင် မပေးချင်ဘူး။ Singtel ကတော့ Customer Service ညံ့ချက်။ ပြောမနေနဲ့ တော့။ တစ်ကယ်။ ချာတူးလန်..။ ဒါနဲ့Starhub ကို အီးမေလ်းပို့ ပြီးမေးကြည့်တယ်။ သူတို့က Provider ပြောင်းမယ်ဆိုရင် ဖုန်းဘောက်ချာ မပေးပါဘူး။ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် နဲ့လျှောက်မယ်ဆိုရင် 20% သက်သာပါမယ်။ ၃ ယောက် နဲ့ အတူတူ တစ်ခါထဲလာလျှောက်မယ်ဆိုရင် ၃၀% သက်သာမယ် ဆိုပြီး မေလ်း ပြန်လာပါတယ်။ လင့်က အောက်ကအတိုင်းပါ။ အောင်ဂလိပ် ကတော့ သူလည်း မကြာခင်က Recontract လုပ်ထားတာ ဘောက်ချာ ၁၅၀ ရတဲ့အပြင် ဖုန်းကို အိမ်အထိ လာပို့ ပေးတယ်တဲ့။ သူက စတားဟပ် အသုံးပြုသူပါ။ သူသုံးတာ မိနစ် ၃၀၀ ပလန်ပါ။ M1 ကတော့ ဘာဆို ဘာမှ မပေးပါဘူး။
Just I want you to calm down for M1. Pls do not take to your heart. Take it easy.
barronbala, Chit.tat.lun.tu, einthu, foruall22, johnansen, kokoye, La Goon, MNO.BN, NayWarWar, paytue, RunAtServer, yokesoe
11-05-2011 02:30 AM #94
olrsm;awG ygvkdY 0ifygvkdufygOD;r,f ...
yef'gajymovkdygyJ ... olrsm;awG u M1 aumif;w,fqkdvkdY oGm;avQmufwm awmfawmf &ifhw,fAsm tajymtqkdawGu .. ay:vpDawG uvnf; bmay:vpDrSef;rodygbl; ...
vkdif; wpfvkdif; &SdjyD;om; aemufwpfvkdif; avQmufomukd abvfjyjyD; avQmufom ukd r&ESkdifygwJh / Bank Statement xyfawmif;jyefa&m .. tJh'geJh vkdcsifawmhvnf; tdrfjyefjyD;oGm;,l&w,fAsm /
wpfvufpwnf; vdyfpmav; ajymif;csifvkdY ajymif;ay;ygqkdwmukd r&bl;wJhAsm / 1627 ukdac:vkdufygqkdjyD; cwfjywfjywfyJajymygw,f / olwkdYukd olwkdY umpwefrm qm;Apf qkdjyD; bmawG
ay;aevJawmh rodawmhyg / uGefx&ufvJ jynfhoGm;vkdY tkdifzkef;4av; avQmufr,fqkdawmh jyxm;wJhaps;u wpfrsdK; S pass Holder qkd&if 200 ykday;&w,f wJhAsm /
awmfjyD r,lawmhbl; Renewal ukd vkdif;csdef;awmhr,fvkdYyJ pdwful;awmhw,f /
M1 ukdrkef;wD;a&; *kdPf; zGifhr,fqkd&if vufwkdYvkdufaemf yefyef ..
pdwfemvGef; vkdY ... qufqH & cufvGef;vkdY .. MuD;us,fvGef;vkdYygAsm /
barronbala, bigxxx, einda74, einthu, foruall22, johnansen, kokoye, ManawHary, mgchaint, MNO.BN, NayWarWar, paytue, richtt, RunAtServer, talkyboy, yokesoe
11-05-2011 03:09 AM #95
Originally Posted by ernest019
bDvf vdyfpmajymif;csif&if tay: u trf0rf; 0bfqdk'fxJ0ifjyD; ajymif;vdk h&w,fav/ tjyifrSmrS ajymif;csifw,fqdk&if yg&m*GefudkoGm;/ &dk;&dk; atmufvufawGu rajymif;ay;bl;wJh/ pwm;[yfqdk&if 'kdbD a*gufayhg/ olwdk h 0bfqdk'frSmygwJh Customer Care qdkwJh ae&mawGrSmoGm;ar;vdk h&w,f/
200 qdkwmu Deposit xifw,f/ pwm;[yfrSmvnf; ay;&w,f/ pwm;[yfrSmu tufpfywfpf twGuf zkef;vdkif; 1 vdkif;yJ avSsmufvdk h&ygw,f/ tD;yD udkifxm;wJhvlu zkef;2vdkif; avSsmufvdk h&ygw,f/
trf0rf;u tpu emrnf odyfr&cifwkef;u umprwrfrm qm;Apf aumif;ygw,f/ aemufydkif; vlawGrsm;vmawmh olvnf; qif;wJ tcsKd;csKd; oGm;ygava&m/
tm;euf.. pwm;[yfrSm tcky&dkrdk;&Sif;csaew,f/ pwm;[yfrSm vdkif;avSsmufr,fh wpfa,muf?2a,mufudk vdkuf&Smvdkufav/ jyD;awmh twlwloGm;vkyf&if2a,mufqdk&if 20%?3a,mufqkd 30% oufomoGm;jyDav/ emqdk trf 1 eJ h pum;udk rajymcsifawmhvdk h eHywf topfawmif ,lyvdkufw,f/
eHywf a[mif;udk quf,ljyD; y&dkAdkif'g ajymif;r,fqdk owdxm;aemf/ uGefx&dkuf ukefrS eHywfajymif;/ r[kwf&if tvmum;ae&if avsmfae&tkef;r,f/
barronbala, bigxxx, Chit.tat.lun.tu, einthu, kokoye, ManawHary, MNO.BN, NayWarWar, paytue, RunAtServer, talkyboy, w4r10ck, yokesoe
11-05-2011 04:42 AM #96
Junior Cupid East (or) West, Home is the Best...miss my family sooo much :'(
Away From My Family :(
Thanked 2,043 Times in 167 Posts
wHk;w,fyJaNymaNym wu,fem;rvnfvdkY tJh'D3a,mufoGm;avQmuf&if 30% oufomw,fqdkwm vpOfaMu;udkaNymwmvm; [if/
Oyrm udk,fu $90 yvef,lxm;wmqdk vwdkif; tJhxJu 30% oufomr,f tJhvdkvm;?
barronbala, Chit.tat.lun.tu, johnansen, kokoye, ManawHary, MNO.BN, NayWarWar, paytue, RunAtServer, talkyboy, THIHA, yokesoe
11-05-2011 05:04 AM #97
မှန်၏။ ကိုယ်ယူထားတဲ့ subscription rate ထဲက ၃၀% သက်သာတာပါ။ အလကားရထားတဲ့ မိနစ်ထက် ကျော်သွားရင်တော့ ပိုပေးရတဲ့ကြေးကိုတော့ လျှော့ မပေးဘူးတဲ့။
barronbala, Chit.tat.lun.tu, einthu, johnansen, kokoye, NayWarWar, paytue, richtt, RunAtServer, talkyboy, THIHA, yokesoe
11-05-2011 05:12 AM #98
Originally Posted by einthu
[kwfygw,f/ udk,f,lxm;wJh yvefuae 30% oufomygw,f/ GST, Caller ID rygao;bl;ayhg/ 30% u twlwl oGm;avSsmufwJh3a,mufvkH; cHpm;cGifh&Sdygw,f/ &DuGefx&kduf orm; uawmh wpfa,mufyJ &ygw,f/ Oyrm vdkif; topf2vkdif; + &DuGefx&dkuf orm; wpfvdkif; ayhg/2ESpfukefoGm;vdk h &DuGefx&dkuf xyfvkyf&ifawmh tJ 30% oufomcGifh r&awmhygbl;wJh/ bmjzpfjzpfav/ 'pfpaumifh &awmh rqdk;ygbl;/
barronbala, Chit.tat.lun.tu, einthu, kokoye, ManawHary, MNO.BN, NayWarWar, Oscar Htun, paytue, richtt, RunAtServer, talkyboy, THIHA, yokesoe
11-05-2011 06:27 AM #99
uGefx&ufvJ jynfhoGm;vkdY tkdifzkef;4av; avQmufr,fqkdawmh jyxm;wJhaps;u wpfrsdK; S pass Holder qkd&if 200 ykday;&w,f wJhAsm /
S Pass Holder rdkY 200 ydkay;&w,fqdkwm M1 yJvm;/ starhub wdkY? singtel wdkYa&mygvm; [if/
barronbala, Chit.tat.lun.tu, kokoye, ManawHary, MNO.BN, NayWarWar, panzekoko, paytue, RunAtServer, THIHA, yokesoe
11-05-2011 08:03 AM #100
၃၀ ရက်နေ့တုန်းက စတားဟပ်မှာ ကိုယ်သက်တမ်းသွားတိုးတော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ တန်းစီနေတဲ့ ရွှေနှစ်ယောက်စီက စပေါ်တစ်ယောက် နှစ်ရာစီတောင်းနေတာတော့ တွေ့ခဲ့တယ်။ အရင်တွေတုန်းက ကျောင်းသားနဲ့ ဒဗလျူပီသမားတွေလောက်သာ စပေါ်ပေးရတယ်ပဲ ကြားဖူးတာ။ သူတို့လဲ ပေါ်လစီပြောင်းသွားပြီထင်တယ်။
အက်ပတ်စ်တွေတော်တော်များများ ပါမစ်ချပေးတာ ကျပ်လိုက်ချိန်တုန်းကတော့ အသီးသီး ပြန်ကုန်ကြတော့ တစ်ချို့က ဒီအတိုင်း ဖုန်းကန်ထရိုက်ကိစ္စ မရှင်းပဲ ပြန်ကုန်တာ များလို့ ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်ပြောတယ်။
2323, badinf, barronbala, Chit.tat.lun.tu, einthu, kokoye, ManawHary, NayWarWar, Oscar Htun, paytue, RunAtServer, talkyboy, THIHA, yokesoe